SomaliNet Magazine: CAAFIMAADKA - CAYILKA OO FARA BA’AN KU HAYA DUNIDA SADDEXAAD
Waddamo badan oo ka mid ah kuwa horay u maray xagga dhaqaalaha ayaa muddo dheer dagaal kula jiray ka hortagga ?cayilka?. Dalka maraykanka waxaa lagu qiyaasaa in saddexdii qofba uu midkood cayilan yahay. Cayilka waddamada horay u maray waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay cudurrada halista ah. Waxaa taas sii dheer in dadka faqriga ah ee ku nool dalka Maraykanka iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ay u badan yihiin dad muuqaal ahaan aad u cayilan. Sababtuna waxay tahay baa la yiri iyadoo aanay cuntadoodu ahayn mid dheelli tiran ee ay iska cunaan wixii ay helaan oo u badan cunno ?fat-ku? ku badan tahay. Dadka dhaqaalaha leh ee reer galbeedka ah waxaa u suura gasha inay cunnadooda dheelli tiraan ayna aad uga taxaddaraan inay aad u cayilaan, iyagoo cayilka u aaminsan inuu yahay foolxumo iyo caafimaad darro ayay si ay ula diriraan waxay markasta ku dadaalaan inay jirkooda dhisaan, ciyaaraan qaybaha kala duwan ee sportiga iyo inay jir dhis ?gym? galaan. Dagaalka cayilka lagula jiro waxaa ku baxa dhaqaale aad u fara badan dalka Maraykanka sidaas oo ay tahayna wali waxba waa laga qaban la? yahay oo lambarka dadka buurbuuran waa sii kordhayaa.?
Waddamada dunida saddexaad oo dhowr sano ka hor aan aad looga walwali jirin dhibaatooyinka ?Cayilka? ayaa waxaad mooddaa in dadaalkii ay ugu jireen la dagaallanka ?Nafaqo Darrida? lagu guulaystay oo tirada dadka nafaqa-darridu hayso ay sii yaraaanayso. diraasad la sameeyey bishii February ee sannadkaan waxaa lagu xaqiijiyey in nafaqa darrada oo kaliya ayan ahayn dhib jira oo caam ah ee ?Cayilkuna? uu yahay dhib soo kordhay oo u baahan in laga feejignaado. Sidoo kale Shir wayne sannadkiiba mar la qabto oo ay soo qabanqaabiso hay?ad la yiraahdo American Association for the Advancement of Science (AAAS) ayaa waxaa aqoonyahanno ka soo qaybgalay ay sheegeen in ?Cayilku? uu ku noqon doono dhibaato wayn waddamada faqriga ah.
Bulsho waynta ku dhaqan waddamada horay u maray, waxay ku qaadatay qarniyaal in dadku baaddiyaha ka soo guuro oo howlihii dhibka badnaa ka soo tago uuna noqdo dad reer magaal ah oo aqoon ku shaqeeya lana helo cunto ka badan tan loo baahan yahay. Laakiin dadyowga deggan waddamada soo koraya tobankii sano oo ugu dambeysay ayaa dadka intooda badani ka soo guureen baaddiyaha oo magaalooyinka waawayn u soo guureen halkaasoo shaqadu ay ka yartahay tii baaddiyaha cunnada iyo biyuhuna ka badan yihiin tii baaddiye. Taasina waxay keentay in dadku isla markiiba aad u cayilo iyadoo aan marna xisaabta lagu darin in Cayilku dhibaato yahay. Inta badan waddamada faqriga ah Cayilku waa astaan lagu garto qofka dhaqaalaha leh.?
Waddamada South Africa iyo Masar ayaa isla markiiba waxaa dadkooda aadka u buurbuuran ay u badan yihiin sida waddamada reer galbeedka. Dalka Hindiyana baaritaan lagu sameeyey 83,000 oo dumar ah waxaa soo baxay in 33% ay qabaan Nafaqo darro halka 12% ay aad u cayilan yihiin. Waddamada Horey u maray cayilka waxaa lagu daray cudurrada ku dhaca dadka faqriga ah oo cuna chips-ka iyo hambergerka. Halka dadka lacagta leh ay cunaan khudaar iyo fruits oo ay markaas jirdhis ?gymka? aadaan.
Waddamada faqriga ah oo wali dagaal ba?an kula jira cudurrada ay ka mid yihiin Malariyada iyo qaaxada, ayaa waxaa muhiim ah in la helo nidaam looga hortago cayilka oo isaguna cudurro badan oo halis ah ay la socdaan. dhaqammo badan oo bulshada dunida saddexaad ay leeyihiin?ayay yiraahdeen dadkii sameeyey baaritaankaan?waxay sahlayaan in dadku cayilo. Waxaa dhaqamadaas ka mid ah cunno aad u badan oo qoyska oo dhan (yar iyo wayn) ay isku mar cunaan iyo in cunnadu ay tahay martiqaadka ugu wanaagsan oo qofkii soo martiya cunno badan lagu sooro.
iyadoo ay aad u adagtahay in dhaqamadaas laga tago iyo dowladaha waddamada soo koraya oo aan diyaar u ahayn inay Cayilka la diriraan iyagoo wali gaajadii aan meel u helin ayaa waxaa laga walwalsan yahay in arrintu faraha ka bixi doonta waqti dhow haddii aan si deg deg ah arrintaan wax looga qaban. Dad badan oo waddammada saddexaad ku dhaqan ma rumaysna in waqti dhow Cayilku uu noqon doono halis u baahan in laga hortago, laakiin hadhow waxaa adkaan doonta in waqtiga dib loo celiyo oo la helo xal fudud oo dadka lagaga badbaadiyo halistaan.